Vaovao - Fitaovana Fitaovana Aluminium
Ny boaty fananganana aliminioma dia iray amin'ireo vokatra avy amin'ny vokatra boaty aluminium. Izy io dia karazana boaty izay noforonina tamin'ny alàlan'ny aliminioma alimika mba hahatratrarana ny fampiharana fametrahana fitaovana sy fitaovana fandrefesana. Tsy mitovy amin'ny boaty fanamoriana hafa, misy alimo aliminioma ity boaty fitaovana ity. Ny mampiavaka ny fitaovana dia lanja maivana, mora zahana, ary manana tombony tsy manam-paharoa amin'ny fitaovana hafa amin'ny tanjaka.
Tranga aliminioma, boaty fitaovana firaka aliminioma, boaty fonosana firaka aliminioma, boaty fitsaboana, boaty fampirantiana ary boaty fonosana vokatra aluminium hafa, Yuhang Chassis Factory vokatra dia ahitana: tranga kosmetika, tranga firavaka, tranga CD, tranga puce, boaty tenimiafina rakitra, boaty salon , boaty fikarakarana ara-pitsaboana, boaty fanamafisam-peo, boaty laptop, boaty famantaranandro, boaty fitaovana, boaty fanidinana, boaty fakana sary, boaty fampisehoana, boatin-javamaneno, boaty klioban'ny billiard, boaty golf, boaty vola, boaty vola, boaty barbecue , boaty divay, boaty fanjonoana, boaty fanomezana, boaty akrilika, liner shockproof isan-karazany, sns.
Ny tena vatan'ny vokatra dia vita avy amin'ny profil aliminioma avo lenta, izay manana ny toetran'ny endrika mety, firafitra matanjaka ary endrika tsara tarehy. Izy io dia be mpampiasa amin'ny fitaovana, metatra, elektronika, fifandraisana, mandeha ho azy, sensor, karatra hendry, fanaraha-maso indostrialy, milina marina ary indostria hafa. Izy io dia fitaovana avo lenta Ny kabinetra idealy.
Kitapo aliminioma [boaty fitaovana vita amin'ny firaka alimo]
(1) Misafidiana tariby welding
Safidio amin'ny ankapobeny ny tadim-pamokarana alimina 301 vita amin'ny alimina sy ny tariby 311 an'ny silika.
(2) Misafidiana fomba sy masontsivana fantsona
Amin'ny ankapobeny dia amin'ny alàlan'ny fomba welding havia, ary ny fanilo fanilo sy ny fitaovana dia mamorona zoro 60 °. Rehefa mihoatra ny 15mm ny hatevin'ny vy, dia ampiasaina ny fomba fanao tsara ary ny zoro fanilo sy ny fitaovana anaovana zoro 90 °.
(3) Fanomanana alohan'ny welding
Mampiasà fomba simika na mekanika mba hanadiovana tanteraka ny sarimihetsika oksida ambonin-tany amin'ny lafiny roa amin'ny lalan'ny lasitra.
Ny fanadiovana mekanika dia afaka mampiasa fanapahana fikosohan-drivotra na herinaratra, scrapers, rakitra ary fitaovana hafa. Ho an'ny sarimihetsika oksida mahia kokoa, ny borosy tariby varahina 0,25mm dia azo ampiasaina ihany koa hanala ireo sarimihetsika oksida.
Ny welding dia tanterahina avy hatrany aorian'ny fanadiovana. Raha mihoatra ny 4 ora ny fitahirizana dia tokony diovina indray.
(4) endri-javatra amin'ny alimina aliminioma sy alimina alimina ao anaty boaty aluminium
Aluminium dia vy fotsy fotsy volafotsy misy plastika tsara, fitondra mandeha amin'ny herinaratra sy amin'ny hafanana avo lenta, ary koa manana ny fahaizana manohitra ny fitrandrahana sy ny harafesina Ny aliminioma dia mora oksizenina mba hamokarana sarimihetsika oksida aluminium, izay mora mamorona fampidirana ao anaty las, amin'izay manimba ny fitohizan'ny vy sy ny fitovian'ny vy, mampihena ny toetran'ny mekanika sy ny fanoherana ny harafesiny.
(5) Fahasarotana amin'ny fametahana aliminioma sy alimina alimika ao anaty boaty aluminium
Mora be ny manisy oksidra. Amin'ny rivotra, ny aliminioma dia mora ampifangaroina amin'ny oksidasiana mba hamoronana horonantsary oksida matevina (hatevina manodidina ny 0,1-0,2 μm), miaraka amina teboka miempo (eo amin'ny 2050 ° C), mihoatra lavitra ny fantson'ireo alimo aluminium sy aliminioma ( tokony ho 600 ℃). Ny hakitroky ny oksida aluminium dia 3.95-4.10g / cm3, izay manodidina ny 1,4 heny noho ny an'ny aluminium. Ny haavon'ny sarimihetsika oksidana aluminium dia mora mandray ny hamandoana. Rehefa mihodina dia manakana ny fifangaroan'ny metaly fototra izy io, ary mora ny mamorona pores, slag ary lesoka toy ny tsy fisian'ny fusion, ka miteraka fahasimban'ny fampisehoana lasitra.
Ny firaka aliminioma dia vita amin'ny aliminioma tsy misy fangarony amin'ny alàlan'ny fampidirana singa manangom-bolo, toy ny firaka alimo-varahina, alimina-zinc-magnesium-varahina alimo alimina mafy. Ny firaka aliminioma dia manana ny mampiavaka ny lanjan'ny maivana, ny vidiny ambany, ny toetra mekanika (ny hery fanamiana), ary ny firaka aliminioma dia mora zahana ary manana fiparitahana hafanana avo lenta. Indrindra ny ampahan'ny motera ny fiara dia mety indrindra amin'ny fampiasana fitaovana aliminioma. Raha ny ankamaroan'ny tranga informatika dia ampiasaina ny alika alimo-varahina. Diniho indrindra ny fanaparitahana ny hafanana. Satria ny varahina sy ny aliminioma dia mifangaro sy alaina, ny fahombiazan'ny fanaparitahana hafanana dia tena tsara, ary na dia ny mpankafy fampangatsiahana rano CPU avo lenta aza dia mampiasa ity fitaovana ity. Karazana vatan'ny boaty amin'ny alalàn'ny aliminioma vita amin'ny fitaovana extruded sy kojakoja mifandraika amin'izany. Tsy mitovy amin'ny boaty mombamomba azy hafa, ity boaty profil aluminium ity dia manana ny mampiavaka ny firafitry ny aliminioma, ny lanjany maivana, ny fanodinana mora, ny fahaiza-mitondra entana, ny endrika kanto ary ny firafitry ny endrika mety. Noho ny toetra tsy manam-paharoa amin'ny boaty profil aluminium sy ny atiny teknolojia avo sy avo kokoa, dia manana anjara toerana tsara kokoa amin'ny fiarovana ny vokatra amin'ny resaka fitaterana sy ny fampiasana mety azy izy io, ary boaty tsara ho an'ny vokatra avo lenta.